အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင် ဥရောပရှိ မြန်မာ့အရေ… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင် ဥရောပရှိ မြန်မာ့အရေ…
·6months ago ·23 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင် ဥရောပရှိ မြန်မာ့အရေးတစိုက်မတ်မတ်ထောက်ခံသူများနဲ့ Online Conferencing စနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းတဲ့ “လောင်ကစားဥပဒေကိုပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ” ကို အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်တဲ့သတင်း
မနက်ဖြန် (၈.၈.၂၀၂၁) မှာကျရောက်မယ့် ၃၃နှစ်မြောက် သမိုင်းဝင် ၈လေးလုံး လူထုဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံနေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပကြမယ့် သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်တဲ့ တယ်လီကျန်းမာအွန်လိုင်းဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်အင်အားတိုးမြင့်ထားသလို COVID-19 လူနာတွေပိုမိုပြသနိုင်ဖို့ ဆေးခန်းချိန်တိုးမြှင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း
ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေး လုပ် ဆောင်ကြဖို့ KNU တပ်မဟာ(၅) တာဝန်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလယ်ဒို က တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းစတဲ့ သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 7.1K Share – 679
မြန်မာ့အရေး အာဆီယံနဲ့ အမေရိကန်ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမယ်
2021-08-07 at 9:06 PM
2021-08-07 at 9:50 PM
Bravo!!! Our Government!!!! Thank you so much….. we’ll be always with you
2021-08-07 at 9:53 PM
Respect KNU, KIA, chin and kayah team…. we love you
2021-08-07 at 9:55 PM
2021-08-07 at 10:06 PM
2021-08-07 at 11:02 PM
2021-08-07 at 11:03 PM
2021-08-07 at 11:38 PM
2021-08-07 at 11:41 PM
Kaung Ma Lay says:
2021-08-07 at 11:56 PM
We stand with NUG.
2021-08-08 at 2:55 AM
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာNUG ထောက်ခံပွဲ ကိုကြိုဆိုပါတယ်
Kyaw Swarhtike says:
2021-08-08 at 7:35 AM
2021-08-08 at 8:36 AM
2021-08-08 at 8:42 AM
NUG is our goverment
2021-08-08 at 9:16 AM
2021-08-08 at 11:23 AM
2021-08-08 at 3:39 PM
ေအးေအး သင္း says:
2021-08-08 at 7:22 PM
သီးသန့် စံအိမ် says:
2021-08-09 at 1:30 PM
2021-08-09 at 3:20 PM
နွေဦး တော်လှန်ရေး says:
2021-08-10 at 10:34 AM
Daw Win says:
2021-08-12 at 7:14 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်ဝေသော ကာကွ…
ဒီတစ်ပါတ် ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်အစီအစဉ်မှာတော့ ဒေါင်းက ပြည်ထောင…